Apple Products | IPhone News (Pejy 7)
iOS 12 Beta 5 dia mampiseho antsika sary vaovao amin'ny boaty famandrihana AirPods vaovao
Ny politika noraisin'i Apple tao anatin'izay taona vitsy lasa izay nanehoany ireo vokatra vaovaony volana vitsivitsy talohan'ny nahatongavan'izy ireo tao amin'ny magazay dia mahatonga ny boaty famerenana tsy misy tariby indray miseho ao amin'ny kaody beta farany misy ny iOS 12.
Apple dia nandefa ny toerana vaovao Apple Music starring DJ Khaled
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mandefa toerana vaovao Apple Music mampiroborobo hira vaovao nataon'i DJ Khaled miaraka amin'i Justin Bieber.
Apple dia namoaka horonantsary vaovao manasongadina ny herin'ny iPhone X
Rehefa roa volana latsaka monja dia ho hitantsika ny iPhone ho avy, ny bandy avy ao Cupertino, dia nanangana ilay milina natolotr'i Apple fanambarana vaovao ahafahantsika mahita ny hery atolotry ny processeur A11 Bionic
Apple dia afaka naka sary an'i Etazonia iray manontolo sy ny antsasaky ny tany noho ny Street View-ny
Miaraka amin'ny fijerena ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny iOS 12, Apple dia hanana fampahalalana an-tsary avy amin'ny antsasaky ny tany mba hamoronana ny Street View azy manokana amin'ny Apple Maps.
Mihena ny anjan'ny tsenan'ny Apple Watch, na dia mitombo aza ny isan'ny fandefasana azy
Ny Apple Watch dia nanaporofo, ho an'ny telovolana iray hafa, ho fitaovana finday be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao, na dia eo aza ny zava-misy fa ny orinasa miorina ao Araka ny filazan'ny orinasa fanadihadiana Canalys, ny isan'ny singa Apple Watch nalefany hamidy , nihoatra ny avo roa heny, saingy nihena ny anjaran'ny tsena
Ity ilay Apple Piazza Liberty vaovao, ilay Apple Store vaovao tsy mampino any Milan
Apple dia namoaka ny sary ofisialy voalohany an'ny Apple Piazza Liberty, iray amin'ireo magazay Apple tsara tarehy indrindra hitanay.
Tonga amin'ny Apple Watch amin'ny fomba ofisialy ny fampiharana Nike Training Club
Ny fangatahana Nike Training Club dia efa ela no nisy tamin'ny iPhones ary nanomboka omaly koa ...
Fanamby vaovao amin'ny Apple Watch amin'ny fetin'ny fanatanjahantena nasionaly any Shina
Manakaiky ny andro ara-panatanjahantena (na fanatanjahan-tena) any Shina, ary nandefa fanamby ho an'ny hetsika vaovao i Apple araka izany hanamarihana ny fotoana.
Ny tsaho momba ny fahavaratra efa mahazatra dia mitondra antsika hevitra momba ny Apple Watch Series 4
Nandefa horonan-tsary izy ireo izay manangona ny tsaho rehetra momba ny Apple Watch Series 4 izay ho hitantsika amin'ny fampisehoana amin'ny volana septambra.
Apple dia hisokatra amin'ny 26 Jolay Apple Store vaovao any Milan miaraka amina endrika manokana
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, hitantsika ny fomba nanombohan'ny tovolahy avy any Cupertino nanavao ny sasany amin'ireo magazay tranainy indrindra, anisan'izany ny tranainy indrindra Tamin'ny 26 Jolay, Apple dia hanokatra Apple Store vaovao sy marika eo afovoan'ny Milan miaraka amina endrika hafa tanteraka ho an'ny fantatra hatreto
Ny App Store Connect sy ny TestFlight dia havaozina miaraka amin'ny fanatsarana sy asa vaovao
Apple dia manome ny rindranasa samihafa ho an'ny mpamorona hahafahan'izy ireo manatanteraka, tsy ny fizahana fotsiny ireo rindranasa izay ananany The App Store Connect sy ny fampiharana TestFlight no nahazo fanavaozam-baovao isan-karazany hanitarana ny isan'ny serivisy atolotray ho an'ireo mpamorona.
"Akombony ny peratrao" fanambarana vaovao telo ho an'ny Apple Watch
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia tsy miala sasatra amin'ity fahavaratra ity ary mampiseho fanentanana dokambarotra vaovao ho an'ny iray amin'ireo ...
Azafady mba ataovy ilay Apple Watch Series 4 vaovao
Isika izay ao anatin'ny toe-javatra "miandry" hividy Apple Watch Series 4 vaovao aorian'ny fiaretana amin'ny ...
Manamboatra eSIM any Espana i Orange, tandremo ireo izay maniry Apple Watch miaraka amin'ny LTE
Lojika amin'izao fotoana izao dia tsy misy na inona na inona voasoratra momba ny fahafahan'ny Apple Watch miaraka amin'ny LTE hifandray amin'ireo zazalahy ...
Ny Apple Watch Series 0 ahy dia very fifandraisana mora kokoa amin'ny watchOS 4.3.1
Mety tsy hitranga amin'ny olon-drehetra izany, fa ny Apple Watch Series 0 very fifandraisana amin'ny ...
Chirp for Apple Watch, fampiharana izay mamerina ny Twitter amin'ny famantaranandro maranin'i Apple
Chirp dia mpanjifa Twitter vaovao hapetraka ao amin'ny Apple Watch anao. Maimaimpoana ary tompon-tany tanteraka.
Tranga Catalyst hiarovana ny iPhone sy Apple Watch amin'ity fahavaratra ity
Catalyst dia manolotra tranga ho antsika iPhone sy Apple Watch miaraka amin'ny ambaratongam-piarovana samihafa ary mety hahatratra 100 metatra ny fanoherana ny rano.
Apple nanitatra ny fampahalalana anatiny momba ny seranam-piaramanidina sy fiantsenana amin'ny alàlan'ny Apple Maps
Ny orinasan-tserasera Cupertino dia nanitatra ny isan'ny seranam-piaramanidina sy ivon-toeram-pivarotana izay anolorany vaovao momba ny ao anatiny.
Fitsapana hafainganam-pandeha eo anelanelan'ny iOS 12 sy iOS 11.4 amin'ny iPhone 5s sy iPhone 8
Andro iray taorian'ny nanombohana ny beta voalohany an'ny iOS 12, tao amin'ny YouTube dia efa afaka mahita fampitahana isan-karazany eo amin'ny beta voalohany an'ny iOS 12 sy ny kinova farany manondro ny Apple 11 an'ny iOS 5 amin'ny iPhone 8s sy iPhone XNUMX iray isika.
Fanamby fanakatonana peratra ho an'ireo mpamorona manatrika WWDC
Efa ela i Apple no nanizingizina ny famporisihana ireo mpampiasa hanao fanazaran-tena amin'izao androntsika izao ...
Apple dia namoaka ny beta voalohany amin'ny tvOS 11.4.1 ary ny watchOS 4.3.2
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia nanararaotra ny andro taorian'ny famoahana ny kinova farany an'ny iOS, watchOS ary tvOS, handefasana ny beta voalohany ho an'ireo mpamorona ny rafitra fikirakirana Apple TV sy ny Apple Watch.
Apple dia afaka mampiditra mpandahateny vaovao miaraka amin'i Siri amin'ny $ 250 amin'ny alàlan'ny Beats
Raha ny filazan'ny mpandalina Gene Munster, Apple dia afaka manatrika mpandahateny maranitra vaovao eo ambanin'ny marika Beats i WWDC, miaraka amin'i Siri $ 250.
Amin'ny 30 Jona dia hanidy ny Apple Store The Pier any Atlantic City i Apple
Ny Apple Store any Atlantic City dia hanidy ny vavahady amin'ny 30 Jona, noho ny fihenan'ny isan'ny mpitsidika sy mpizahatany mitsidika ny faritra mbola nisokatra.
Apple dia afaka namidy HomePod manodidina ny 600.000 tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona
Araka ny Strategy Analytics, ny HomePod dia namidy nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2018, maherin'ny 600.000 unit manerana an'izao tontolo izao, any amin'ireo firenena telo misy azy io.
Ny Logitech Crayon, ilay Apple Pencil mora vidy, efa hita eny an-tsena, na dia tsy ho azonao atao aza ny mividy azy
Roa volana mialoha ny fandaharam-potoana, Logitech dia nanambara ny fisian'ny Logitech Crayon, ilay Apple Pencil mora vidy mifanentana amin'ny iPad 2018 fotsiny ary azon'ny sekoly idirana fotsiny.
Apple Music dia manana mpampiasa mavitrika maherin'ny 50 tapitrisa, izay tsy mpamandrika
Raha ny filazan'ny talen'ny tompon'andraikitra Apple amin'ny resadresaka nifanaovana tamin'i Bloomberg, ny serivisy mozika streaming an'i Apple dia manana mpampiasa maherin'ny 50 tapitrisa, izay tsy mandoa mpampiasa.
Lehilahy iray 76 taona dia novonjen'ny Apple Watch ary te-hampiroborobo bebe kokoa ny fampiasana azy
Gaston D'Aquino dia mpampiasa Apple Watch vaovao izay novonjen'ny smartwatch tamin'ny fahafatesany. Lazainay aminao ny tantarany sy ny fomba nandefasany taratasy tany amin'i Tim Cook
JUUK Viteza, rendrika italiana ho an'ny Apple Watch
JUUK dia manome maodely roa amin'ny tadiny Apple Watch vita amin'ny hoditra ary misy amin'ny loko isan-karazany: Monza sy Viteza.
Mahavariana, manamora ny fanangonana angona misy eo amin'ny dokotera sy ny marary
Ny tombony azo amin'ny Apple Watch amin'ny tananao dia maro ary tsy mijanona amin'ny fampandrenesana fotsiny izy ireo ...
Mijanona amin'ny sonia ny iOS 11.3 i Apple
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 11.3, ka raha manana olana amin'ny fitaovantsika izahay dia tsy afaka miala amin'ny iOS 11.3.1 fotsiny.
Ny Apple Watch dia nanampy famonjena hafa. Amin'ity tranga ity, tovovavy 18 taona Florida
Misy vaovao marobe mifandraika amin'ny Apple Watch sy ny famonjena ny ain'ny olona, ​​indraindray noho ny ...
Firenena telo hafa no hanatevin-daharana ny Apple Pay amin'ity taona ity: Norvezy, Polonina ary Ukraine
Mitohy ny fanitarana ny Apple Pay ary raha teto amintsika andro vitsy lasa izay ny ...
Apple dia mety miasa amin'ny solomaso virtoaly virtoaly misy efijery 8k roa
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny drafitra hoavin'i Apple amin'ny zava-misy virtoaly sy nampitomboina dia mampiseho antsika solomaso izay hampiditra efijery 2k 8k, amin'ny tetikasa antsoina hoe T288 izay hahita ny hazavan'ny 2020.
Intel no hiandraikitra ny famatsiana an'i Apple amin'ny 70% amin'ny chip LTE amin'ny iPhone manaraka
Amin'ity taona ity, ny fisian'ny chips an'ny LTE an'ny Intel amin'ny iPhones dia hitombo hatramin'ny 70%, hampihena bebe kokoa ny isan-jato omen'ny Qualcomm.
Apple hampitsahatra ny fivarotana AirPort Extreme, AirPort Express ary AirPort Time rehefa lany ny stock
Apple dia nanambara tamim-pomba ofisialy fa hitsahatra amin'ny fivarotana ny isan-karazany ny vokatra AirPort rehefa amidy ireo singa mbola ananany tahiry, ka tsy hanavao ity lisitry ny vokatra ity.
Ny rindranasa hitantanana ampahany amin'ny atin'ny iPhone, iPad na iPod touch dia misy ao amin'ny Microsoft Store ankehitriny
Apple nanampy seranam-piaramanidina iraisampirenena telo vaovao ho an'ny Apple Maps
Miaraka amin'ny hevitra hanohizana ny fanatsarana ny serivisy Apple Maps, nampiditra ny toerana tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena telo vaovao ry zalahy Cupertino.
BBVA sy BancaMarch dia ho avy tsy ho ela amin'ny Apple Pay
Aorian'ny fisalasalana maro momba ny hahatongavany, BBVA dia ho hita amin'ny Apple Pay amin'ny farany. BancaMarch koa dia nampiana ho "tsy ho ela".
Apple Watch Series 3 LTE dia manome tombony an'i Verizon
Ny fitomboan'ny mpandraharaha telefaona amin'izao fotoana izao dia tsy miankina amin'ny finday amidy ihany ...
Nilaza ny mpandinika fa hitombo manodidina ny 40% isan-taona ny Apple Music
Raha ny filazan'ny mpandinika sasany dia mety hitombo 40% isan-taona ny serivisy fandefasana mozika an'i Apple ao anatin'ny 3 taona.
Mahazoa fihenam-bidy hatramin'ny 60% amin'ny vokatra Apple amin'ity faran'ny herinandro ity amin'ny eBay
Ny eBay Super Weekend dia miverina amin'ny lozam-pifamoivoizana miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 60% amin'ny fitaovana elektronika an'ny marika rehetra, indrindra ny Apple
Ekipa McDonalds sy Apple Pay hanome ovy maimaimpoana ho an'ny mpanjifany
Ny fampiroboroboan'i Apple miaraka amin'ny rojom-pisakafoanana haingam-pandeha McDonalds dia tsy dia fahita, na dia marina aza fa ...
Apple Pay dia manohy ny fanitarana iraisam-pirenena azy any Eropa, Sina ary Amerika Avaratra
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manohy manitatra ny serivisy Apple Pay, fa tsy amin'ny firenena maro kokoa, fa mifantoka amin'ny fanitarana ny isan'ny banky any amin'ireo firenena misy izany.
Ny mpanjifa Caja Rural sy EVObanco dia afaka mampiasa Apple Pay izao
Ary manomboka izao dia efa manana ny safidiny ny mpanjifan'ny Caja Rural sy EVObanco hanampiana ...
Apple dia hanamboatra Apple Watch Series 2 miaraka amin'ny olan'ny bateria maimaim-poana
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia misy tranga sasany amin'ireo mpampiasa Apple Watch izay nahatsikaritra fa ny efijery an'ny ...
Fivarotana fanamboarana iPhone tsy nahazoana alalana no namely an'i Apple
Na dia manao izay azony atao rehetra aza i Apple mba hisorohana ny atrikasan'ny antoko fahatelo tsy ahafahany manamboatra iPhone amin'ny fomba tsy ofisialy, tany Norvezy dia namela fitoriana lehibe iray momba an'io.
Apple Music dia miomana ny hamoaka fanadihadiana roa avy amin'ny mpamokatra mozika elektronika Flume
Amin'ny faniriany hanohy hamolavola vokatra audiovisual dia nanandrana namoaka fanadihadiana roa momba ny fiainan'ny mpamokatra mozika elektronika Flume i Apple.
Apple dia miomana ny handefa fanamby manokana amin'ny Andron'ny Tany miaraka amin'ny zava-bita sy sticker vaovao
Ny zazalahin'i Cupertino dia mamporisika antsika hanohy hanao fanatanjahan-tena amin'ny andro manaraka amin'ny tany izay ankalazaina manerantany amin'ny 22 aprily.
Apple Music dia manana boss vaovao
Ny hetsika farany hitantsika eo amin'ny laharan'ny Apple dia misy fiantraikany amin'ny Apple Music, izay nanjary lohan'ny serivisy mozika streaming an'i Apple i Oliver Schussser.
Apple dia manomana ny fampifanarahana ny "Foundation" ny asa futuristikan'i Isaac Asimov
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia mividy ny zon'ny Fundación, sanganasa futurista an'ny angano Isaac Asimov. Fampifanarahana misy fihatsaram-belatsihy amin'ny serivisy ho an'ny horonan-tsary amin'ny Apple streaming.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazaiko aminao ny fomba famadihana Apple Watch izay naneho ny paoma an'i Apple mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Apple dia mamporisika ny Apple Pay amin'ny horonantsary iPhone X vaovao 4
Apple dia te hampiroborobo ny fampiasana Apple Pay ary ny fomba tsara kokoa anaovana azy toy izay amin'ny alàlan'ny iPhone X sy Face ID. Noho io antony io dia namoaka horonantsary efatra tao amin'ny fantsona YouTube-ny ​​izy
Apple Music dia mahatratra mpanjifa 40 tapitrisa
Ny tarehimarika ofisialy farany avy amin'ny Apple Music dia nilaza fa nahatratra 40 tapitrisa ny mpanjifa ny serivisy mozika streaming an'i Apple.
Brezila dia efa manana Apple Pay
Ny vaovao momba ny fomba fandoavam-bola an'ny Apple, Apple Pay, dia tsy mijanona amin'ny fahatongavany ary amin'ity tranga ity dia miresaka ...
Instagram ho an'ny Apple Watch dia nanjavona tamin'ny tapaka lalan-dra
Aza matahotra, fa ny Instagram kosa dia nanjavona tamin'ny fikorotanana tamin'ny endriny ho an'ny famantaranandro matanjaka an'ny orinasa Cupertino.
Ny Apple Watch dia tsy hanana metatra glucose, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao
Betsaka ny voalaza fa ny Apple Watch manaraka dia afaka mampiditra metrôly glucose ao anaty ra, zavatra izay tsy dia azo inoana loatra ato ho ato.
Ny Apple Watch Series 4 dia afaka manavao ny endriny miaraka amin'ny efijery lehibe kokoa
Raha ny filazan'ny mpandalina Ming-Chi Kuo, ny taranaka fahefatra an'ny Apple Watch, Series 4, dia hahita 15% ny haben'ny efijery.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPad 2017 sy ny iPad 2018 vaovao
Izahay dia mitondra anao ny fampitahana amin'ny iPad 2017 sy ny iPad 2018 vaovao hahafahanao mandray an-tsaina izay mampiavaka ny iPad iray amin'ny iray hafa ary misafidy tsara.
Space Grey Magic Keyboard ary Magic Mouse dia amidy
Ny hetsika Apple natao androany tolakandro tany Chicago dia namela anay ny vaovao momba ny iPad vaovao miaraka amin'ny vidiny ...
IPad vaovao 2018, matanjaka kokoa, mahay kokoa ary mora vidy ankehitriny
Andeha hojerentsika ny iPad 2018 vaovao, afaka miara-miasa amin'ny Apple Pencil ary miaraka amin'ny vidiny mbola tsy fahita tao anatin'ity karazana vokatra ity.
Ahoana ny fanovana anarana ny fitaovana Apple rehetra
Ianaro ny fomba hanovana anarana ny fitaovana Apple rehetra anananao. Noho izany dia azonao atao ny mandamina ny zava-drehetra ary tsy afangaro amin'ny fitaovana.
Ny mpandimby iPhone X 5,8-inch mety ho 10% mora kokoa
Ny iPhone X manaraka dia ho 10% mora kokoa noho ny vidin'ny famokarana ambany.
Tonga any Apple koa ny lohataona miaraka amina tadiny 24 vaovao ho an'ny Apple Watch
Ny tovolahy avy any Cupertino dia te handray ny lohataona miaraka amina fehin-kibo vaovao vitsivitsy ho an'ny ...
Apple dia namoaka beta fahenina tamin'ny tvOS 11.3
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia namoaka ny beta fahenina amin'ny tvOS 11.3, beta fahenina amin'ny kinova manaraka amin'ny rafitra fiasa Apple ho an'ny Apple TV.
Bankia sy Sabadell, dia efa miseho amin'ny lisitra mba hifanaraka amin'ny Apple Pay
Tsy misy isalasalana, vaovao tsara ho an'ny mpanjifa Apple sy ireo banky roa lehibe ireo, Bankia sy ...
Apple dia hanokatra ny Apple Store fahavalo any Japon amin'ny 7 aprily
Ny volana aprily ho avy izao, indrindra ny faha-7, no andro nofidian'i Apple hanokatra ny Apple Store fahavalo ao amin'ny firenena.
Amazon, fa tsy Apple, dia mety ho orinasa voalohany nahatratra tombam-bidy mitentina lavitrisa dolara
Raha manohy ny taham-pitomboana sahala amin'ny tamin'ny taon-dasa i Amazon, dia mety ho lasa orinasa voalohany nihoatra ny vola mitentina 1000 miliara
Tsy ampy ho anao ve ny iCloud Drive 5 GB maimaim-poana? Asehonay aminao ny fomba hikaon-doha habaka bebe kokoa amin'ny iCloud amin'ny fitaovana iOS (iPhone na iPad)
Apple dia nanitatra ny fanandramana beta an'ny Apple Music for Artists
Tamin'ity herinandro ity ihany dia nisy vaovao ofisialy avy amin'ny Apple mifandraika amin'ny Apple Music sy ny ...
Ny beta fahenina an'ny watcOS 4.3 dia efa misy izao
Ora vitsy taorian'ny famoahana ny beta fahenina an'ny iOS 11.3, namoaka ny beta fahenina an'ny WatchOS 4.3 ny orinasa monina ao Cupertino.
Apple dia afaka nampiato ny famokarana ny iPhone 8 Plus noho ny fampiasana ireo ampahany tsy nahazoana alalana
Raha ny tsiliantsofina isan-karazany dia mety nanana olana tamin'ny famokarana iPhone 8 Plus i Apple ary noterena hampiato ny famokarana mandritra ny roa herinandro.
Ny fampiasana ny Apple Watch Series 3 dia mitombo ary ny Series 0 dia milatsaka mafy
Ny fananganana ny Apple Watch Series 3 manohitra ny fihenan'ny fampiasana ao amin'ny Apple Watch Series 0 na koa ...
Apple Music dia manidy volana iray ho an'ny mpanjifa ary manamafy ny serivisiny
Apple Music dia mitombo hatrany. Raha ny angom-baovao farany, ny serivisy fandefasana mozika an'i Apple dia nanidy iray volana ho an'ireo mpanjifa.
Apple lasa marika an-taonan'ny maro an'arivony
Navoaka ny fanadihadiana iray izay anaovana famakafakana ireo marika an'arivony tapitrisa, mpampiasa eo anelanelan'ny 20 ka hatramin'ny 30 taona, ary Apple no marika tiany indrindra.
Apple dia namoaka beta fahadimy an'ny watchOS 4.3
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa ny beta fahadimy an'ny watchOS 4.3, beta izay mitondra andian-baovao ho antsika, indrindra fa ny hatsarana.
WatchChat, ny fampiharana tsara indrindra hanana WhatsApp amin'ny Apple Watch
WatchChat dia manome antsika ny fahafaha-mampiasa WhatsApp amin'ny Apple Watch miaraka amina fampiharana haingana sy maharitra izay ahafahantsika mihaino feon-tsoratra ihany koa
Araraoty ny tolotra eBay Super Weekend amin'ity faran'ny herinandro ity
Mandritra ity faran'ny herinandro ity, eBay dia manolotra antsika vokatra elektronika marobe miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 60%.
Ny "zon'antoka fanamboarana" dia mety ho zava-misy ihany koa any California
Ny zon'antoka fanamboarana, volavolan-dalàna izay nanomboka tamin'ny herintaona, dia mahazo vahana ary misy fanjakana 18 mandinika izany ankehitriny.
Android P dia efa namela topy maso ny amin'ny ho avin'ny "notch" amin'ny Android
Android P dia efa eo amin'ny dingana farany amin'ny fivoarany ary io no fomba kasain'ny rafitra fiasan'i Google hifanaraka amin'ny "notch" rehetra misy.
6 volana maimaim-poana amin'ny Apple Music ho an'ny fiara vaovao ao amin'ny vondrona Fiat sy Volkswagen
Ny fampiroboroboana ny karazana rehetra dia tsara foana ary mety ho tonga amin'ny fotoana sy toe-javatra rehetra izany. Mazava ny Apple ...
Apple dia namoaka horonantsary fohy notarihin'i Spike Jonze hampiroborobo ny HomePod
Ny bandy Cupertino dia namoaka mozika fohy hampiroborobo ny HomePod notarihan'ny talen'ny sarimihetsika malaza Spike Jonze.
Hevi-dehibe voalohany amin'ny sarin'ireo kapila an-tsofina an'i Apple
Toa amin'ny faran'ity taona 2018 ity, Apple dia handefa headset izay hiditra tanteraka amin'ny faran'ny sehatra. Ny hevitra voalohany dia efa noforonina
Fanamby hetsika vaovao ho an'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy amin'ny 8 martsa
Tsy isalasalana fa hitantsika ny tohin'ny famantaranandron'i Apple ny sisa amin'ireo mpifaninana izay manana famantaranandro marani-tsaina, eny ...
Ireto AirPod manaraka ireto dia mety hanana sensor mba handrefesana hetsika ara-batana
Misy patanty misimisy momba ny AirPod vaovao. Amin'ity tranga ity dia misy sensor vaovao izay hanampy antsika hahafantatra ny toetoetrantsika ara-batana amin'ny fotoana rehetra
Apple dia miomana hankalaza ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy amin'ny fomba
Ny tovolahy Cupertino dia manatevin-daharana ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy miaraka amina andiany hetsika noforonin'i ary ho fampidirana sy fahasamihafana, izay notarihin'ny vehivavy avokoa.
Apple dia manakarama injeniera iray avy ao amin'ny Twitter hanatsara ny fahakingan-tsainy
Ny fanaovan-tsonia Apple farany hanatsarana ny fiasan'ny faharanitan-tsolika artifisialy, ary indrindra ny Siri, dia i Michael Abbott, injeniera teo aloha tao amin'ny Twitter sy Palm.
Apple handefa AC Wellness, toeram-pitsaboana mpitsabo
Ny fanombohana ny Apple Watch dia ohatra mazava iray amin'ny fomba hanovan'ny Apple ny paikadiny amin'ny varotra ...
Te-hanao ski na snowboarding ve ianao ary manana Apple Watch Series 3? Ho hitanao amin'ny famantaranandro izao ny asanao
Ary i Apple dia vonona amin'ny kinova 4.2 an'ny watchOS ireo API vaovao mamela ny mpampiasa ...
Rain Alarm XT, novaina manohana ny iPhone X
Eny, efa ela no nanaovan'izy ireo izany fa farafaharatsiny azontsika lazaina sahady fa iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hodinihina ...
Samsung manemotra ny fandefasana mpandahateny maranitra hifaninana amin'ny HomePod
Raha ny filazan'ny lohan'ny fizarana finday an'ny Samsung dia tsy ho tonga ny faran'ny taona miaraka amin'ny vintana kely ny fanombohana ny HomePod an'ny Samsung.
Ny orinasa natokana hanolotra ny serivisiny fidirana amin'ny Apple iPhones, dia afaka manolotra ny serivisy saika amin'ny kinova iOS 11 sy amin'ny fitaovana rehetra.
Ny fanavaozana farany ny torolàlana fiarovana ny iOS dia mampiseho amintsika ny fomba ampiasain'ny orinasa monina ao Cupertino ny serivisy fitehirizan-dranon'i Google, ankoatry ny Microsoft sy Amazon.
Ny tahiry HomePod dia mihoatra ny mpifaninana rehetra afa-tsy ny Amazon Echo Dot
Ny HomePod dia nahavita kick-off lehibe tamin'ny alàlan'ny fisongonana ireo mpifaninana aminy ankoatry ny Amazon Echo Dot.
Ny Apple TV tany am-boalohany dia tsy ho afaka hiditra amin'ny iTunes Store
Tsy hanana fanohanana intsony ny Apple TV amin'ny fidirana amin'ny iTunes Store. Nanjary nandaitra ity fepetra ity, noho ny fanavaozana ny fiarovana izay tsy ho raisin'ny Apple TV voalohany.
Apple dia hamoaka headphone amin'ny sofina be loatra amin'ity taona ity, hoy i Min-Chi Kuo
Araka ny filazan'ny mpiara-dia amin'i Min-Chi Kuo, Apple dia miasa amina headset amin'ity taona ity izy ireo.
Apple Pay Cash dia mety ho tonga any Espana amin'ny fotoana iray hafa
Fambara maromaro hita amin'ny tambajotra sosialy nampitandrina ny amin'ny fahatongavan'ny Apple Pay Cash ho any Espana, Irlandy ary Brezila.
Apple Pay dia mbola manohy manampy: mpampiasa maherin'ny 127 tapitrisa ary banky mihoatra ny 2.700
Ny zavatra momba ny Apple Pay dia marina fa ho an'ny maro dia tsy haingana toy ny nandrasana tamin'ny ...
Efa misy ny beta fahatelo ho an'ny mpamorona watchOS 4.3
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia nanolotra ny beta beta fahatelo an'ny rafitra fiasan'i Apple ho an'ny Apple Watch.
Apple dia maka ny ampahany amin'ny anjaran'i Samsung any Korea atsimo
Araka ny angon-drakitra farany avy amin'ny Strategy Analytics, Apple dia nahavita naka ny ampahany tamin'ny anjara very tamin'ny Samsung tamin'ny taona lasa.
Noho ny AirPods sy iPhone X, Apple no lasa orinasa manavao indrindra eran'izao tontolo izao
Taorian'ny taona maro tsy nahajanona azy, Apple dia niverina teo amin'ny laharana ambony indrindra amin'ireo orinasa manavao indrindra nandritra ny taona 2018.
Ny vahaolana amin'ny peratra fotsy navelan'ny HomePod dia tena tsotra, hoy ny injeniera indostrialy sasany
Ny vahaolana amin'ny fefy fotsy navelan'ny HomePod dia ny fanovana ny fitaovana ampiasain'ny fototry ny HomePod, ho an'ny iray mitovy amin'ilay ampiasaina amin'ny tadin'ny Apple Watch
Apple manavao ny Carpool Karaoke mandritra ny vanim-potoana faharoa
Apple dia nanapa-kevitra ny hanavao ny viralin'i James Corden ary ankalazaina Carpool Karaoke mandritra ny vanim-potoana faharoa amin'ny Apple Music.
Mampiseho amintsika ny fomba hahazoana tombony betsaka amin'ny HomePod ilay horonantsary Apple vaovao
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia nandefa horonantsary vaovao izay ahitantsika izay azontsika atao sy tsy azontsika atao amin'ny HomePod.
Tsy ny HomePod ihany, ny Sonos One ihany koa no manome marika
Ny iray amin'ireo mpifaninana mivantana an'ny HomePod, ny Sonos One, dia mamela marika eo amin'ny hazo ihany koa noho ny fihoaram-peon'ny mpandahateny, na dia malina kokoa aza.
Akatony ny peratrao, tian'i Apple hanana fiainana salama azo atao isika
Apple dia maniry hanana fiainana salama araka izay azo atao isika, noho izany dia vao avy namorona faritra ao amin'ny tranonkalany izy ireo izay anazavany ny zava-drehetra momba ny peratra hetsika ao amin'ny Apple Watch.
Ny Apple Park dia manana kilema, kilema izay manimba betsaka ...
Ny mpiasa sasany ao amin'ny Apple Park vaovao dia mitaraina amin'ny Apple Human Resources fa misy lozam-pifamoivoizana tsy mahita ny rindrin'ny vera amin'ilay trano.
Ny Twitter dia manala ny fampiharana azy amin'ny Mac App Store maharitra
Ny fampiharana Twitter ofisialy ho an'ny Mac dia nesorina tsy ho ela tao amin'ny Mac App Store ary hijanona tsy hiasa ao anatin'ny 30 andro.
Pad & Quill dia mandefa mpiaro hoditra vitsivitsy ho an'ny fototry ny HomePod
Andro iray taorian'ny nanambaran'ny besinimaro ny olan'ny HomePod tamin'ny sehatry ny hazo voatsabo dia nanolotra tranga vita amin'ny hoditra ho an'ny fototry ny HomePod ny mpanamboatra Pad & Quill.
Ny HomePod dia natao ho an'ny Apple Music sy Siri, saingy tsy mila azy ireo ianao
Ny HomePod dia mpandahateny ary azonao ampiasaina tahaka ny hafa rehetra. Tsy mila Apple Music na Bluetooth ianao hankafizanao ny HomePod.
Ny vidin'ny HomePod dia tafakatra hatramin'ny $ 216
Ny vidin'ny famokarana HomePod dia tafakatra hatramin'ny $ 216, manolotra maridre izay tsy mahatratra 40%, maridre ambany kokoa noho ny natolotry ny Amazon Echo na Google Home Max.
Ny Apple Watch Series 3 dia tonga tao amin'ilay faritra namboarina indray tao amin'ny Apple Apple Store
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nanomboka namidy ireo tovolahy avy any Cupertino teo amin'ny sehatry ny fitaovana ...
Ny HomePod dia afaka mamela marika amin'ny faritra sasany, indrindra ny hazo
Ny olana voalohany asehon'ny HomePod dia tsy misy ifandraisany amin'ny kalitaon'ny feony, fa amin'ny marika sasany avelany kosa rehefa apetraka amin'ny sehatra hazo.
Ny fanadihadiana sasany dia naminavina fa tsy araka ny antenaina ny varotra HomePod
Toy ny mahazatra, ireo fanadihadiana rehetra ireo dia tsy maintsy namboarina tamin'ny masira ary izany dia ny fanovan'ny olona ny sainy momba ny ...
EVO Banco sy Caja Rural dia mifanentana amin'ny Apple Pay tsy ho ela
Fikambanana Espaniôla vaovao roa no tsy ho ela dia hifanaraka amin'ny serivisy Apple Pay. Izy ireo dia i EVO Banco sy Caja Rural.
Ny Siri of the HomePod dia mamaly tsara ao amin'ny 52.3% amin'ireo tranga ireo
Manomboka ny fitsapana voalohany amin'ny HomePod, amin'ity tranga ity dia mampitandrina izy ireo fa tsy dia tsara loatra amin'ny HomePod an'i Apple i Siri, mahazo ny antsasaky ny fotoana fotsiny izany ...
Apple Music fihenam-bidy ho an'ny mpianatra tany amin'ny firenena vaovao 82
Ny bandy Cupertino dia nanitatra ny firenena misy ny Apple Music ho an'ny mpianatra, manolotra fihenam-bidy 50% amin'ny sarany hatramin'ny 48 volana.
Araka ny Consumer Reports, ny Google Home Max sy ny Sonos One dia samy manome feo tsara kokoa noho ny HomePod.
Ny vondrona tsy mitady tombony, Consumer Reports, loharanom-pahalalana ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa amerikana dia nilaza fa ny HomePod dia tsy mifanaraka amin'ny Sonos One sy Google Home Max
Ny lisitry ny mpampiasa HomePod dia efa hita ao amin'ny tranokalan'ny Apple
Apple dia manome ny torolàlana ho an'ny mpampiasa HomePod ho antsika, torolàlana ahafahantsika mianatra momba ny asa sy ny mety rehetra omen'ny HomePod antsika.
Ireto misy horonantsary 3 voalohany an'ny HomePod izay mampiseho ny fomba fiasan'izy ireo
Raha mbola tsy azonao antoka raha mahafeno ny filanao ny HomePod, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay aminao ny horonan-tsary telo ahafahanao mahita ny fomba fiasan'izy io, ny fomba fanamboarana azy ary ny tombo-tsoa azontsika amin'ny Siri.
Apple News dia manampy ampahany natokana ho an'ny Olaimpika Ririnina Pyeongchang
Ireo tovolahy avy any Cupertino dia manampy fizarana manokana ao amin'ny Apple News ahafahantsika manaraka ny vaovao rehetra avy amin'ny Lalao Olaimpika amin'ny ririnina atao any Pyeongchang.
Ny AirPod sasany izay ivoahan'ny setroka ary toa vaky avy eo
Vaovao izay hitan'ny mpampiasa maro androany tao amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana ao amin'ny Apple sy ...
HomePod dia tsy manitsy afa-tsy ny mandanjalanja mba handefasana ny feo tsara indrindra ho an'ny hira tsirairay
Ny HomePod dia marani-tsaina kokoa noho ny niheverantsika azy tany am-boalohany. Ny mpandahateny Apple dia tsy manolotra equalizer ho an'ny mpampiasa: manamboatra ny tenany amin'ny toe-javatra sy ny hira tsirairay izy
Aza avela hijanona ny gadona! Vetivety dia hanana emoji vaovao isika ao amin'ny iDevices
Ny consortium Unicode dia mandefa ny lisitr'ireo emoji vaovao ho hitantsika amin'ny iOS 12 manaraka amin'ny tapany farany amin'ny 2018, ary eny, ireo maherifo dia tonga amin'ireo emotikona malaza ...
Ny mpikambana Nike Plus dia afaka mahazo famandrihana sy Playlists Apple Music manokana
Mihatsara ny fifandraisana eo amin'i Apple sy Nike ary afaka mahazo famandrihana Apple Music maimaim-poana isika izao rehefa manatsara ny marika ato anatin'ny NikePlus.
Apple dia manohy manao sonia ary anjaran'ny Apple Music indray izao
Ny fanampim-baovao farany teo amin'ny sehatry ny mozika streaming an'i Apple dia i Alex Gale, izay hiandraikitra ny fandrindrana ny atiny rehetra amin'ireo sehatra mifandraika amin'ny mozika an'ny Apple.
Araka ny Canalys, nisy 18 tapitrisa Apple Watch tamin'ny 2017
Ny vinavinan'ny mpivarotra ho an'ny Apple Watch dia miabo hatrany fa ny zava-nitranga tamin'ny herintaona ...
Apple dia efa mivarotra Apple TV 4K nohavaozina tany Espana
Apple dia manana ny singa Apple TV TV naverina tamin'ny laoniny voalohany tany Espana. Manana singa miaraka amin'ny tahiry 4 na 32 GB ianao ary ny vidiny dia milatsaka ambanin'ny 64 euro.
Ny iPad ihany no takelaka be mpividy indrindra eto an-tany
Mandritra ny taona iray hafa, ny iPad dia mijanona ho takelaka be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao, alohan'ilay goavan'ny varotra amin'ny Internet, Amazon sy Samsung, izay nahavery ny tsena tamin'ny taon-dasa.
Ny fotoana fandefasana HomePod dia mitombo amin'ny faha-13 any UK
Ny fe-potoana fandefasana ho an'ny HomePod any Angletera dia nitarina tato anatin'ny andro vitsivitsy hatramin'ny 13 febroary, raha any Etazonia sy Aostralia kosa, ireo firenena roa hafa izay misy azy amin'ny andiany voalohany, dia mbola mitoetra ihany izy io amin'ny voalohany .
Apple Music dia mety mihoatra ny Spotify amin'ny isan'ny mpanjifa any Etazonia amin'ity fahavaratra ity
Araka ny notaterin'ny The Wall Street Journal, Apple Music dia mitombo ny isan'ny mpampiasa haingana kokoa noho ny Spotify, ka amin'ny tapaky ny fahavaratra dia mety hihoatra azy io any Etazonia.
Tian'i Apple hikarakara ny fontsika amin'ny Andron'ny Mpifankatia isika miaraka amina fanamby amin'ny hetsika vaovao
Tapa-kevitra ny ankizilahy Cupertino fa hanana fomba fiaina salama isika handefa ny fanambin'ny fo vaovao mba hitandrina ny fontsika mandritra ny Andron'ny mpifankatia.
YouTube TV mety ho tonga amin'ny Apple TV tsy ho ela
Ity fahitalavitra YouTube ity dia fitaovana iray hafa hijerena ny atiny mivantana ary efa natokana ho an'ny mpampiasa…
Ny zava-bitan'ny Apple Watch Action dia tsy mahomby ary mahavita tena
Ny mpampiasa sasany izay manao Fizarana miaraka amin'ny Apple Watch dia mahazo ny zava-bita tamin'ny volana febroary tamin'ny fomba voafaritra ...
Hita amin'ny Apple Music izao ny discography an'i Def Leppard
Ny vondrona farany mahita ny hazavan'ny andro amin'ny serivisy mozika mivantana dia Def Leppard, serivisy izay azo zahana amin'ny serivisy mozika mivantana rehetra.
Ny HomePod dia hanisy tariby azo soloina
Ny atin'ny boaty HomePod dia hanana mpikambana iray hafa izay tsy voalaza ao amin'ny tranokalan'ny Apple: hanana tadin'ny herinaratra soloina izy io
Apple Watch Series 3 LTE hanomboka hamidy any Singapore sy Hong Kong
Ny Apple Watch Series 3 LTE dia hamely tsena vaovao amin'ny volana Febroary ho avy izao. Ny tsara vintana dia i Singapaoro sy Hong Kong
Ny refinera29 dia manolotra antsika ny fifandraisana voalohany amin'ny HomePod vaovao
Ny mpandahateny Apple dia vaovao amin'ny tambajotra mandritra ny ora farany ary izany aorian'ny ...
Ny beta voalohany amin'ny tvOS 11.3 dia azo alaina ho an'ny mpamorona ihany koa
Ny beta farany ho an'ny Apple TV izay natolotry ny tovolahy avy any Cupertino ho an'ny mpamorona dia ny laharana 11.3, kinova izay manome vaovao kely antsika ankehitriny.
Ny HomePod dia hifanaraka amin'ny endrika FLAC tsy misy fatiantoka
Na eo aza ny tsy fanoloran'ny Apple fanampiana avy amin'ny teratany ho an'ny fisie amin'ny endrika FLAC, ny mpandahateny voalohany an'i Apple dia tsy ny endrika FLAC tsy misy fatiantoka ihany no tohanany, fa ny endrika ALAC ihany koa, izay Apple manana sy manome antsika Similary manana kalitao.
iOS 11.3 sy tvOS 11.3 dia manolotra fanampiana ho an'ny AirPlay 2 miaraka amina efitrano malalaka maro
Ny beta voalohany an'ny iOS 11.3 sy tvOS 11.3 dia manolotra fanohanana feno amin'ny playback AirPlay 2 sy ny efitrano maro, ity asa farany ity dia ahafahantsika mamerina ny atiny mitovy amin'ny HomePod rehetra ao an-tranonay.
Ny Apple Store voalohany any Korea Atsimo dia hisokatra ao Seoul amin'ny 27 Janoary
Efa ho iray volana aorian'ny daty voatondro voalohany, ny Apple Store voalohany any Korea Atsimo dia hanokatra ny varavarany amin'ny 27 Janoary
Nokia Sleep no solon'ny orinasa Finnish amin'ny Apple's Beddit hanaraha-maso ny torimaso
Nokia Sleep dia tarika izay tafiditra ao amin'ny kidoro ary mamela antsika hanara-maso ny asan'ny torimaso omentsika amin'ny fanomezana isa isa antsika araka ny ora sy fotoana fialan-tsasatra lalina.
Misaotra an'i Apple Watch fa ho rivotra ny fifehezana ireo fitaovana Whirlpool
ny orinasan-tsakafo any Whirlpool dia nanambara fotsiny ny fampidirana ireo vokatra rehetra miaraka amin'ny Apple Watch Apple hahafahany mitantana azy ireo lavitra.
GBH dia maminavina ny fandefasana HomePod ao anatin'ny 4-6 herinandro
Ny Apple HomePod dia niaritra fanemorana tsy nampoizina tamin'ny famoahana azy ary ankehitriny ny vondrona mpandinika GBH dia mampitandrina fa ...
Apple Watch Series 3 dia tsy mifanaraka amin'ny hopitaly
Mpampiasa Apple Watch Series 3 samihafa no mitatitra fihetsika hafahafa amin'ny famantaranandron'izy ireo rehefa any amin'ny hopitaly
Fanamby vaovao ho an'ny Apple Watch: «Atombohy amin'ny tongotra ankavanana ny taona»
Ity ny fanamby atolotry ny Apple antsika hanombohana ny taona amin'ny fanaovana fanazaran-tena ho an'ireo mpampiasa manana ...
Apple dia manoratra ny marika Connects to Apple Watch ary Connect amin'ny Apple Watch
Ireo mari-pamantarana roa vaovao nosoratan'i Apple dia mampiseho amintsika ny fomba fikasan'ny orinasa monina ao Cupertino hanome tombo-kase mifanentana amin'ny Watch
Elaela vao tonga ny metatra glucose an'ny Apple Watch
Ny metatra glucose efa nandrasana hatry ny ela ho an'ny Apple Watch dia mbola haharitra taona vitsivitsy vao hahatratra ny tsena, satria tsy avelan'ny teknolojia ankehitriny.
Apple dia miasa amin'ny Apple Watch miaraka amin'ny EKG namboarina, hoy i Bloomberg
Raha ny tsaho, Apple dia miasa amina kinova vaovao an'ny Apple Watch miaraka amina EKG namboarina hanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna ao am-po.
Ny Apple TVs 4k dia mivarotra ao anatin'ny minitra vitsy aorian'ny fisian'ny Amazon
Ireo tovolahy avy any Cupertino sy i Apple dia toa nanao sonia fifanekena aorian'izay ...
Ny fampiharana YouTube TV dia nahemotra ny famoahana ny Apple TV hatramin'ny Q2018 XNUMX
Amin'izao fotoana izao dia toa manondro ny zava-drehetra fa ny fampiharana YouTube TV an'ny Apple TV dia tsy hahatratra ny tsena raha tsy amin'ny fiandohan'ny taona 2018
Apple Pay dia mitombo hatrany any Etazonia, Frantsa ary Irlandy
Ny rafitra fandoavam-bola tsy misy ifandraisany amin'i Apple dia toa tsy misy farany. Nanjary nalaza tsikelikely izy io, na eo aza ...